ကိတ် Middleton လက်ချောင်းများတူညီတဲ့အရှည်?
ထူးဆန်းတဲ့မေးခွန်းကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော သို့သော်ဤဟာသသည်မဟုတ်, အတော်လေးအစစ်အမှန်ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုကအဓိကဗြိတိန်တပုဒ် - The Daily Mail ကနှင့် The ယာ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကယင်းလောက Chronicles အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်မှသူမ၏ခရီးစဉ်အတွင်းဖန်ဆင်းကင်းဘရစ်၏ Duchess ၏ဓါတ်ပုံများ၏တဦးတည်းမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲငင်။
ဓာတ်ပုံများတွင်ကိတ်ရန်သူ၏လက်၌ clutch ရရှိထားသူ, သူ့အညွှန်းကိန်း, အလယ်တန်းနှင့်လက်စွပ်ကိုလက်ချောင်းအမြင်အာရုံအရှည်တူညီတဲ့ကြည့်ရှုပါ။ သင်သည်ဤဓာတ်ပုံကိုစုံစမ်းသတင်းစာပညာအဘို့အကြောင်းမရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထင်ပါသလား? ဒါဟာပါ!
အဆိုပါသတင်းစာများရဲ့ style အတွက်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အပြည့်အဝရှိကြ၏ "ဘာကြောင့်ကိတ် Middleton အပေါငျးတို့သလက်ချောင်းတူညီတဲ့အရှည်ရှိသည်?" ။ မင်းသားဝီလျံ၏လက်ချောင်းများမယား၏ထူးဆန်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ7မတ်လအပေါ် The Sun ၌ရေးသားထားသည်။ အဆိုပါထုတ်ဝေလက်ချောင်းများ၏အရှည်ပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးအမိဝမ်းထဲမှာနေဆဲဟော်မုန်းကလေးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့ပြင်အဆိုပါသတင်းစာဆရာတူညီတဲ့အရှည်လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်နှင့်အတူလူတစ်ဦးဟာအကောင်းဆုံးမှတ်ဉာဏ်အရာ၌ဝါကြွားနိုင်သော (သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနော်ဝေတက္ကသိုလ်ကိုကိုးကားနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ် "ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်လူ့အပြုအမူ" နှင့်အတူ) တောင်းဆိုမှုများ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာဖို့စိတ်သဘောထားနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။
"ဘာကြောင့် Kate ရဲ့လက်ချောင်းအားလုံးအတူတူပင်အတိုင်း LENGTH ကွ?" Pic.twitter.com/StrJJIUjE5
- မှ Ian McDougall (@ IanMcDougall1) မတ်လ 11, 2018
ငါးရက်အကြာတွင်သူ၏အပေါင်းအဘော်ကစာနယ်ဇင်းသမားများအနေဖြင့်တုတ် The Daily Mail ကရတယ်။ သူတို့ကကက်သရင်းအနီရောင် box ထဲမှာပူးတွဲသင်၏လက်ချောင်းဓာတ်ပုံကိုသရုပ်ပြပါ။ အဆိုပါဓာတ်ပုံ Duchess ၏လက်ချောင်းများနေဆဲအတူတူပင်အရှည်မဟုတ်ကြောင်းပြသထားတယ်, ဒါပေမယ့်, လက်ထက်, ပစ္စည်းလှည့်နေသည်။
"ဘာကြောင့် Kate ရဲ့လက်ချောင်းအားလုံးအတူတူပင်အတိုင်း LENGTH ကွ?" Pic.twitter.com/fHvMcQu9bO
- ရီကာဒို Autobahn (@ricardoautobahn) မတ်လ 11, 2018
လက်ချောင်းကိတ် Middleton များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်တည်မှုမေးခွန်းအတွက်အဖြေလောကဓာတ်လုံးကိုရှာဖှေ: အစာအုပျ၏ရေးသားသူ chiromantists, ဆေးသမား, ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေကနေမှတ်ချက်များစုဆောင်းခဲ့သည်။ Editor ကိုစာဖတ်သူများကဒီပစ္စည်းကိုမှအကြမ်းဖက်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်မထင်မှတ်ဗြိတိန်ချက်ချင်းခေါင်းစဉ်ထဲမှာရပ်ကြီးတစ်ရယ်စရာမေးခွန်းတက်ခူးနှင့်တစ်ရယ်စရာအင်တာနက် meme ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဗြိတိန်သတင်းစာများအဘယ်အရာကိုရေး? လက်ချောင်းကိတ် Middleton အကြောင်း!
အရှုပ်တော်ပုံခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အဆိုပါရယ်စရာအကောင်းဆုံးလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုကိုဖန်တီးရန်လူရွှင်တော်ကွန်ယက်ကိုမှုတ်သွင်း။ တွစ်တာခုနှစ်တွင်ပို့စ်များကိုချက်ချင်းပေါ်လာသည်အရေးပါသောဇာတ်ကောင်ဖြစ်သောထဲမှာ, Duchess ၏လက်ချောင်းများ၏အရှည်အကြောင်းကိုမေးမွနျးပါ, မင်းသားဝီလျံ, ဘားရက်အိုဘားမား, Donald Trump, ဂြိုဟ်သားဇာစ်မြစ်၏လက်ဝါးနှင့် humanoids အပေါ်မျက်စိနှင့်အတူ "ပန်ရဲ့ Labyrinth" ၏နဂါးစတင်ခဲ့သည်။
စာရှုသူများအမကြာခဏဗြိတိန်ထုတ်ဝေရေးသားခဲ့သည်ငယ်သောအရာတို့ကိုအဘယျ၏သင်္ကေတအဖြစ်, ကိတ်နှင့် ပတ်သက်. လက်ခံထားသောပစ္စည်းများအဖငျြးပွော။
ဂရိတ်ဗြိတိန်၏ 25 အနာဂတ်ဧကရာဇ်
ဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုကိုအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုဖတ်ရတဲ့အခါ, သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမကြာခဏအသေးစားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်။ ဤအချိန်တွင် Chronicle, ဖြစ်ကောင်း, ဝေးလွန်းသွားပြီ။ သူတို့ကပဲအောက်စဖို့နှင့်ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုယ်တိုင်ကစဉ်အတွင်းကျောင်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူ Duchess ၏စားဆင်ယင်အကြောင်းအနည်းငယ်စကားပြောပြရန်လိုအပ်လုပ်ပြီးစေ့စပ်စာဖတ်သူများခေါင်းစဉ်ရာ၌ခန့်ထားပြီမဟုတ်ဘူး "တူညီတဲ့အရှည်၏အဘယ်ကြောင့်ကိတ် Middleton အပေါငျးတို့သလက်ချောင်း?" တဲ့ meme ၌။
Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီ, လက်ကိုကိုင်ပြီး, အများပြည်သူ၌ထငျရှား
ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်း Vogue တရုတ်၏စာမကျြနှာ၌ထငျရှား
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက် Ariana Grande
ဘာဘရာ Palvin နဲ့ Hailey Baldwin သစ်ကိုပြက္ခဒိန် roller အချစ်ထဲမှာပှငျ့လငျးစှာပွောထုံးစံ၌ပေါ်ထွန်းသော
အဆိုပါ 2016 လီယိုနာဒိုများအတွက်အော်စကာဆုရှင်လိမ့်မည်နည်း
အခန်းကဏ္ဍ: မင်းသားဝီလျံကသူ့အစ်ကိုရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအကောင်းဆုံးသောသူ, ကိတ် - အလုပ်ထုတ် ...
ကိတ် Middleton မင်းသားဝီလျံနှင့်ဟယ်ရီအိုလံပစ်ပန်းခြံလည်ပတ်ခဲ့
Katy Perry ကမ္ဘာတွင်အမြင့်ဆုံးပေးချေပေါ့ပ်အဆိုတော်ဖြစ်လာသည်
မလိုလားအပ်သောကျက်သရေ: သတို့သမီးခိုခို Rocha ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာပေါ်သူမ၏ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်း
သူတို့ပျားရည်ဆမ်းခရီးသုံးစွဲဘယ်မှာ Miranda Kerr နှင့်အီဗန် Spiegel ပြသ
တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဝတ်စားဆင်ယင်အတွက် Kylie Minogue ၏ Premiere ၏ကြယ်ပွင့် "တင့်တယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမမြစ်တား" ခဲ့
Ozzy နှင့်ရှာရုန် Osbourne ထပ်တလဲလဲကွာရှင်း၏ဖျက်သိမ်းပြီးနောက်မင်္ဂလာဆောင်သစ္စာဂတိကိုပြုတတ်ကြ၏
ဇွန်လ 1 - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလေးများနေ့ရဲ့နေ့
ဒါပေမယ့်အံ့သြစရာမဖြစ်စေနိုင်သည့်ကမ္ဘာပေါ်မှာ 16 အရှိဆုံးထူးထူးဆန်းဆန်းဘုရားကျောင်း,
မိန်းကလေး '' ဆင်မြန်းအတွက်သူ၏သားတို့နှင့်အတူ Megan Fox ကတစ်ဦးစူပါမားကတ်များတွင်စျေးဝယ်သွားဖို့
ကလေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောသည်အဘယ်အရာ မှစ. ?
သိုင်းရွိုက် - အမျိုးသမီးရောဂါလက္ခဏာများ
Talkback ကို - ဤအစီအစဉ်နှင့်မည်သို့အသုံးပြုသည်အဘယ်နည်း
Finish ကို blockhouse
Rybinsk - ဆွဲဆောင်မှုများ
တရုတ်ခေါက်ဆွဲ - အရသာအာရှဟင်းလျာများ၏မူလချက်ပြုတ်နည်းများ
တစ်ဦးတဲ့ acorn ကနေပိတ်ပင်ကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဆွီဒင် - ဟိုတယ်